Gudoomiye cusub oo loo doortay deegaanka Cagaaran ee gobolka Mudug – Radio Daljir
Maarso 14, 2013 4:36 b 0
Cagaaran, March 14- Deeganka Cagaaran oo hoos tagta gobolka Mudug waxaa maanta lagu guulaystay in loo sameeyo maamul cusub ka dib muddo maamulkii hore uu isku dhajiyay xafiiska.
Dhismaaha maamulkan ayaa yimid kadib markii uu dhamaday waqtigii maamulki hore ee Cagaaran, in muddaana maamulka gobolka iyo odoyaasha deegaanka ay wadeen qancinta maamulkii hore si ay u suurta gasho dhisidda maamul cusub.
Waxgaradka deegaanka ayaa gudoomiye u doortay Aaden Wali C/raxmaan Cali, doorashadaasoo ay ka qayb galeen waxgarad kala duwan waxaa soo dhaweeyay bulshada reer Cagaaran.
Deeq aadan abshir juddhe oo kamid ahaa qaban qabiyaashi doorashada lagu doortay Aaden ayaa daljir u sheegay doorashadaasi inay u dhacday sidii loogu tala galay ayna ku qanceen bulshada deegaanka iyo maamulka, lana filayo dhamaystirka doorashada maalmaha soo socda inay halkaasi u tagaan maamulka degmada Gaalkacyo iyo kan gobolka Mudug.
Beesha Cagaaran ayaa ka mida deegaanada jidka laamigaa ee dhanka waqooyi ee Gaalkacyo waxaana baryihii danbe ay samaynaysay hormar dhanka bulshadaa.